Mul'annoo - Guddisa - fili
Dirree kabala Haaloojiirraa lama cuqaasi ykn Mirga cuqaasi
Guddisuun gargaraan Unix Linux fi foddaawwan hujeffamu qabate Galmee %100 waliin qabata guddisuu fooddaa keessatti Olkaa'ame qabata guddisuu dheeraatti bakka hojjeeffannoo unix/linux agarsiifameera. Qabata guddisii jijjiiruuf, gatii dhiibeentaa kabala Haalojii irratti lama-cuqaasi ykn mirga cuqaasi,ittaansudhaan qabata guddisuu barbaaddu fili.
Qabatgalmeewwan maraa guddisii bakka galmee ammee fi akaakuu walfakkaata booda bantu agarsiisuuf qindeessi.
Bal'inaafi oojjaa walsimsiisi
Galmeewwan barruuttif teessoo mula'annooqindeessuu ni dandeessa. Galteewwan qindaa'ina teessuma mula'annoo gara garaa ilaaluuf qabata guddiisuu xiqqeessi.
Teessuumni mula'annoo ofumaa fuulaawwanwalcinaatti hanga wantii guddisii haayyamuu agarsiisa.
Teessuumni mula'annoo fuula baaqqee fuulaawwan waljala jiranii agarsiisa, garuu cinaa walinitti miti.
Teessuumni mula'annoo tarjaawwan keessatti fuulaawwan lakkoofsa kennamee cinaafi cinaa tarjaawwani argita. Lakkoofsa tarjaawwanii galchi.
Teessuuma mula'annoo haalata barruu keessaa fuulawwan lama wal-cinaatti akka barruu banii keessaa argita. Fuulli jalqabaa fuula mirgaa fuula lakkoofsa qaraati.
Title is: Teessuma Mul'annoo $ Guddisuu